Nin lacag ku bixiyey dilka Saaxiibtiisa oo Uur-laheyd | HalQaran.com
Home Warar Cusub Nin lacag ku bixiyey dilka Saaxiibtiisa oo Uur-laheyd
Sawirkan waa Tshegofatso Pule ee la dilay, Photo @KEBA99
Johannesburg (Halqaran.com) – Rabshado ka dhashay dilka haweeney u dhalatay dalka Koonfur Africa oo lagu macaabo Tshegofatso Pule ayaa la sheegay in dilkeeda uu qeyb weyn ku lahaa nin ay saaxiibo ahaayeen.
Ntuthuko Ntokozo Shoba ayaa lagu eedeeyay in uu soo qorsheeyay dilkii Tshegofatso Pule. Ninkan ayaa la sheegay in uu lacag ku bixiyey dilkii saaxiibtiis.
Haweeneyda la qaarijiyay ayaa waxaa la sheegay in ay uur laheyd, waxaana meyd keeda laga soo helay geed dushiisa labo sano ka hor.
Toddobaadkii hore, maxkamad ku taala Johannesburg ayaa waxaa la soo hor istaajiyay ninkii dilay Ms Pule. Mzikayise Malephane ayaa qirtay dilka Ms Pule, waxa ayna maxkamadda ku xukuntay 20 sano oo xarig ah.
Mr Malephane ayaa soo bandhigay heshiis uu la galay Mr Shoba wuxuuna sheegay in markii hore uu u soo bandhigay lacag gaareysa 7000 oo Rand ama $480 si uu u fuliyo dilka Ms Pule, laakiin wuxuu sheegay in lacagtu ay gaartay ilaa 70000 oo Rand.
Sida laga soo xigtay qoyska haweeneydan 28 jirka aheyd, waxa ay sheegeen in ay aaday guriga Mr Shoba kaasoo ku yaala Florida oo ka tirsan degmada West Rand oo 16 KM galbeed ka xigta magaalada Johannesburg bishii Juun 2019-kii, muran ayaana soo kala dhex galay waxa uuna u yeeray taksi uu darawal ka ahaa Mr Malephane.
5-tii bishii Juun meydka Ms Pule ayaa laga helay iyada oo ka laadlaada geed ku yaalla deegaanka Roodepoort ee degmada West Rand.
Si kastaba ha ahaatee, waddanka Koonfur Africa ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee haweenka ay kala kulmaan xad gudubyo. Madaxweynaha Koonfur Africa Cyril Ramaphosa ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareynayo xad gudubyada haweenka.
Nin lacag ku bixiyey dilka Saaxiibtiisa